光益商事 - ミャンマーと光益商事 - ミャンマー被害者の会
Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ ကြောင့်နစ်နာသူများအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာ
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သည် မြန်မာလူမျိုးနစ်နာသူများအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များက Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏လိမ်လည်မှုအား အားလုံးသိရှိစေရန်၊ မြန်မာလူမျိုးများ၏ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကို တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ ပြန်လည်ရရှိစေရန်၊ နောက်ထပ်နစ်နာသူများမပေါ်ပေါက် စေရန်၊ မြန်မာလူမျိုးနစ်နာသူများ၏ကိုယ်စား အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များက ပါဝင်တည်ထောင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင်ရေးသားဖေါ်ပြချက်များသည်၊ အားလုံးအမှန်တရားဖြစ်ပါသည်။ ဤဖော်ပြချက်များသည် Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏လိမ်လည်မှုများ၏ တစိတ်တဒေသထက်မပိုပါ။ သတင်းအချက်အလက်များထပ်မံ ရရှိလျှင် ထပ်မံတင်ပေးပါမည်။
Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏လိမ်လည်မှုများ
၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် Mr. Kinoshita Eigo (Koeki Shoji ၏ဒါရိုက်တာ)သည် မြန်မာအကြီးဆုံးမြို့တော် ရန်ကုန်တွင် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မြန်မာအားကူညီရန် ဂျပန်အစိုးရမှ အလုပ်ဗီဇာဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စီမံကိန်းချမှတ်ကာ ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ မိမိတို့Koeki Shoji ကုမ္ပဏီမှ ထိုလုပ်ငန်း၏တစိတ်တဒေသကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း၊ ရာနှင့်ချီသော မြန်မာလူမျိုးများထံမှ သိန်းထောင်နှင့်ချီ၍ လိမ်လည်စုဆောင်းရယူထားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ (Mr. Kinoshita Eigoမှာ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ရာ ၄င်း၏နေရာသို့ ဝင်ရောက်လာသူ Mr. Aikawa Daiki ကလည်းကြိုတင်ငွေဟုပြောပြီးသိန်းရာနှင့်ချီသောငွေများကောက်ခံခဲ့ပါသည်။)
Mr. Kinoshita Eigo Mr. Aikawa Daiki
သို့သော်လည်း သုံးနှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင် ဂျပန်သို့ တဦးတယောက်မျှ မသွားရသေးပါ။ ငွေများပြန်လည်အမ်းရန်မပြောနှင့် ရန်ကုန်ရှိအသားကလောက်ထွက်သော မြန်မာတစ်စု၏အကူအညီဖြင့် ဂျပန်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ ဆင်းရဲသောတိုင်းပြည်၌ ၈ျပန်တွင်အလုပ်လုပ်ကာချမ်းသာနိုင်မည်ဟူသော အခွင့်အရေးများပြကာ လာရောက်လိမ်လည်လှည့်ဖျားခဲ့သော Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ရပ်မှာ လုံးဝခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ။
တကယ်တမ်းမှာKoeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ရပ်နှင့် လိမ်လည်မှုမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုထက်မက ကြာခဲ့ပြီ။ ဥပမာပြသော် ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ဂျပန်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သိန်းရာကျော် ဝန်ဆောင်ခပေးခဲ့သူ ကိုလွင်မှာ ယခုထက်ထိ ဂျပန်သွားးရန်အိပ်မက်မက်ဆဲပင်။
Victims Listနှင့် သက်သေများမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်က ရေခဲတောင်စွန်းလေးရဲ့ပမာဏလောက်ပဲ ရှိပါသေးသည်။ ရေအောက်မှာ မည်မျှရှိနေသေးသနည်း ဆိုတာ မှန်းကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သတင်းအချက်အလက်များရရှိလျှင် ထပ်မံတင်ပေးပါမည်။
၄င်းတို့၏ လိမ်လည်လှည့်စားမှုကို ခံခဲ့ရသော မြန်မာလူမျိုး အားလုံး ဤဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဆက်သွယ်ပါ။ တစ်ယောက်အားနှင့်ယူသော်မရ၊ တသောင်းအားနှင့်ယူသော်ရ၏။
ဒေါ်မိုးမိုးငြိမ်းသည် ၄င်း၏အားထားရသော ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေကောင်းများ၏ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် ရန်ကုန်ရှိ ဂျပန်သံရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြန်မာသံရုံး၊ဟာရဂျုကု ရဲစခန်းမှတဆင့် အမြန်ဆုံးငွေများပြန်ရရှိရေးနှင့်တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Koeki Shoji ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်၍
Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏MD ဖြစ်သူ Tsuchino Masumaru သည် မြန်မာလူမျိုးများအား ဟု ၄င်းတို့ Koeki Shoji ကုမ္ပဏီသည် မည်၍မည်မျှ ကောင်းမွန်ကြောင်းကို လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တကယ်တမ်းမှာ Shibuya ရှိ တိုက်အို တိုက်ရှုပ်တခုတွင်းရှိ ကျဉ်းမြောင်းမဲမှောင်သော အခန်းတစ်ခန်းသာဖြစ်ပြီး သီရိအုန်းမြင့် ဆိုသူ မြန်မာလူမျိုး က တစ်ဦးတည်းသော ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ၏လိမ်လည်မှု(ယမ်းငွေ၂၅သိန်း)ကို ခံခဲ့ရသော ဂျပန်လူမျိုး Mr. Nishigaito က ဖွင့်ဟခဲ့ပါသည်။ ဆိုင်းဘုတ်ပင် မရှိပဲ စာတိုက်ပုန်းပေါ်တွင် Koeki Shoji ဟုရေးသားထားသော စာရွက်ပိုင်းကလေးသာ ကပ်ထားသည့် အမည်ခံကုမ္ပဏီသာဖြစ်ပါသည်။
ထပ်မံ၍ Tsuchino Masumaru က ၄င်းသည် ယခုအာဏာရပါတီ၏ အကြီးအကဲ မစ္စတာအို၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး ထိုအာဏာရနိုင်ငံရေးသမားများအဆက်အသွယ်ဖြင့် အလုပ်ဗီဇာကို အလွယ်တကူ ရယူပေးနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော်ငြား ဤသည်မှာလည်း တဖက်သားကို အယုံသွင်းလိမ်လည်သည့် နည်းတစ်မျိုးဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
Koeki Shoji ၏တည်နေရာတိုက် ကုမ္ပဏီအမည်ပါစာရွက်ပိုင်း Tsuchino ၏လိပ်စာကပ်
Koeki Shoji Co.,Ltd.
〒151-0053 Tokyo Shibuya Yoyogi 2-20-2
Koeki Shoji ကုမ္ပဏီ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှလိမ်လည်မှုများ
ဆိုင်းဘုတ်ပင် မရှိပဲ စာတိုက်ပုန်းပေါ်တွင် စာရွက်ပိုင်းကလေးသာ ကပ်ထားသည့် အမည်ခံသာဖြစ်သော Koeki Shoji （http://koeki-s.co.jp/）ံ ကုမ္ပဏီသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အခြေအမြစ်မရှိသော အချက်အလက်များကို တင်ထားပြီး ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးကို စွပ်နေပါသည်။ ၄င်းတို့အနက် တချို့မှာ….
UMFCCI အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်း။ အမှန်မှာ ၂၀၀၉နှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပြီး။
UMFCCI အဖွဲ့နှင့်အကျိုးတူ ဂျပန်စာသင်တန်းကို ဖွင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုခြင်း။ အမှန်မှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများအနက် ဂျပန်စာကိုတာဝန်ယူသင်ကြားခြင်းသာ။ လိမ်လည်မှုအေးပေါက်ပြီး နောက်ပိုင်းအားလုံးဖြုတ်ခံရပြီး။
အိုဆာကာစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအသိအမှတ်ပြု။ အိုဆာကာစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအမည်စာ၇င်း ရှာဖွေသော်ငြား Koeki Shojiံကုမ္ပဏီမပါဝင်ပါ။
Koeki Shoji Co.,Ltd.၏ ဝဘ်ဆိုက်（http://koeki-s.co.jp/）မှာ ၂၀၁၁ခုနှစ်မှစ၍ တင်ထားခြင်းကို ရပ်နားခဲ့သော်လည်း ကျမတို့မှာ ထိုစဉ်က ဝဘ်ဆိုက်ကို သိမ်းထားပါသဖြင့် ဤနေရာမှ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။